Ngabe inyanga idala ukuzamazama komhlaba okukhulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ithimba eliholwa yisifundiswa uSatoshi Ide, wase-University of Tokyo (Japan) selifinyelele kulesi siphetho. Sengathi bekuyiphupho elibi, inyanga ibonakala idala ukuzamazama komhlaba okukhulu, okungenzeka ukuthi kunamagagasi aphakeme noma aphilayo, okungukuthi, lapho i-satellite yethu isesigabeni senyanga esigcwele noma esisha.
I-satellite yethu ibivele yaziwa ukuthi inamandla angabonakali kepha anamandla eMhlabeni, enza ukuthi amagagasi, awugcine uzinzile kancane, futhi kukhona nalabo abacabanga ukuthi kuthonya imizwa yabantu, kepha kuze kube manje, akukho cwaningo olwenziwe ukuthi Kuboniswe ukuthi nayo ingadlala indima ebaluleke kakhulu ekubangeleni ukuzamazama komhlaba.
Ithimba labaphenyi lenze ucwaningo, olushicilelwe ephephabhukwini i-Nature Geoscience, laphofuthi baphinde benza ubukhulu nobukhulu bamandla olwandle, okungukuthi, umphumela wamandla adonsela phansi ngenxa yokuthi amagagasi akhona, ukuthi kwakukhona amasonto ngaphambi kokuzamazama komhlaba okukhulu, ngobukhulu obungu-5,5 noma ngaphezulu.
Ngakho ithole ukuxhumana phakathi kwamaza olwandle nokuzamazama komhlaba okukhulu, kepha ayitholakalanga ngokuzamazama komhlaba okuncane kakhulu. Noma kunjalo, kusengaphambili okumangazayo, okungasetshenziswa ukubikezela ukuzamazama komhlaba okukhulu.
Ukuzamazama komhlaba okunjengeMaule (eChile) ngonyaka ka-2010 noma iTohoku-oki (eJapan) ngo-2011 kwenzeka lapho kwakukhona ukuphakama okukhulu kwamandla amakhulu olwandle. Ukuze, kubonakala sengathi kunobudlelwano phakathi komcimbi owodwa nomunye okuzovumela abacwaningi, mhlawumbe esikhathini esizayo esiseduze, ukuba baqonde kangcono ukuthi ukuzamazama komhlaba kuqala kanjani nokuthi kungabikezelwa kanjani ukuvimbela abantu abaningi ekulahlekelweni yimpilo yabo kulezi zehlakalo ezimbi.
Ubucabangani ngalokhu okutholakele? 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ngabe inyanga idala ukuzamazama komhlaba okukhulu?